कस्तो छ नेपालमा वीमा सर्भेयर क्षेत्र ?-Setoghar
कस्तो छ नेपालमा वीमा सर्भेयर क्षेत्र ?
मोहन पुरुष ढकाल
मोहन पुरुष ढकाल, महासचिव, वीमा सर्भेयर एसोसिएसन
नेपालमा २०५० भदौ देखि वीमा सर्भेयरको रुपमा काम शुरु गर्नुभएका मोहन पुरुष ढकाल शुरुमा नेपाल सरकार अन्तरगतको विमा समिति मातहत रहेर काम शुरु गर्नुभएको हो । विमा क्षेत्रमा काम गर्नको लागि स्वीकृति लिएर काममा संलग्न हुनुभएका ढकाल आज सम्म पनि विमा सर्भेयर क्षेत्र अझै राम्रो तवरले व्यवस्थित र विश्वासिलो बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ । हाल वीमा सर्भेयरको रुपमा काम गर्दै आइरहेका व्यक्तिहरुबाट स्थापित वीमा सर्भेयर एसोसिएसनमा महासचिवको भूमिका निर्वाह गदै आउनुभएका ढकाल यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सर्भेयर, बीमा कम्पनी र राज्य लगायतका निकायहरुले सोच्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
वीमा सर्भेयरको आवश्यकता
वीमितले शुरुमा वीमा गर्ने क्रममा पछि हुन सक्ने सम्भावित घटना एवं क्षतिलाई लक्षित गरी त्यस बापत क्षतिपुर्ति पाउने आकाङ्क्षा लिएको हुन्छ । कुनै कारणवश सम्बन्धित वीमितको सम्पत्ति नोक्सानी भए त्यसको मूल्याङ्कन गरी त्यस बापत निश्चित रकम सिफारिस गर्ने कार्य बीमा सर्भेयरबाट हँुदै आएको छ । विमा समिति विमा क्षेत्रमा तेस्रो पक्षको रुपमा सर्भेयरको आवश्यकता महसुस गरेर सर्भेयरको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
नेपालमा विमा सर्भेयरको इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरु करिब ८ सय छन् । यद्यपि यस क्षेत्रमा संलग्न सक्रिय व्यवसायीहरु भने केबल १० प्रतिशतको हाराहारी (७०-८० जना)मा मात्र छन् । यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुको बार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस बर्ष पनि करिब २ सयले नवीकरण गर्नुभएको छ । यद्यपि नवीकरण गर्ने व्यवसायी र इजाजत लिएर सक्रिय तवरले काम गर्ने व्यवसायी बीच अन्तर किन रह्यो त ?
शङकै शङकामा टिकेकाे विश्वासिलो क्षेत्र
वीमा सर्भेयर क्षेत्रलाई विश्वासिलो क्षेत्र मानिन्छ । यद्यपि अहिले सम्म यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका सर्भेयरहरुलाई विश्वास गर्ने वातावरण भने अझै बनिसकेको छैन । अर्कोतिर यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरु बीच समेत अस्वस्थकर प्रतिष्पर्धा रहँदै छ । यस व्यवसायमा नयाँ आउन चाहने व्यक्तिहरुलाई यस क्षेत्रको बारेमा सिकाउने जिम्मेवारी व्यावसायिक अनुभव समेटेका व्यक्तिहरुको नै रहने भएपनि अहिले सम्म नयाँ पुस्तालाई राम्रो सँग प्रशिक्षित गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । यसकारण वीमा सर्भेयर क्षेत्रलाई विश्वासमा चल्ने व्यवसाय मान्दामान्दै पनि यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरु बीच नै अविश्वसनीय वातावरण कायम रहेको, वीमा कम्पनी एवं राज्य पक्षले समेत विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको कारण वीमा सर्भेयर क्षेत्रलाई अविश्वास नै अविश्वासले भरिएको विश्वासिलो व्यवसाय (संगठन)को रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ ।
विश्वासले भरिएको मानिने यस क्षेत्रलाई वास्तविक रुपमा विश्वसनीय बनाउन विभिन्न पक्षको भूमिका रहने गछ्र्र । यस क्षेत्रमा कार्यरत सर्भेयरहरुलाई राज्य पक्षबाट पनि जुन किसिमको विश्वास गरिनुपर्ने हो, त्यो वातावरण बन्न नसकेको कारण विमा सर्भेयर क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको हो ।
इन्स्योर (सम्पत्तिको विमा गर्नेवाला), इन्स्युरर (सम्पत्तिको विमा लिनेवाला) र सर्भेयर (क्षतिको उचित मूल्याङ्कनकर्ता) गरी यस क्षेत्र सँग मुख्य ३ पक्ष जोडिएका हुन्छन् । साथै यस क्षेत्रमा संलग्न १ महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहने सेवाग्राही (वीमा गर्ने व्यक्ति)को सम्पत्तिमा कुनै क्षति भएको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रचलित नियम अनुसार सर्भेयरले आँकलन गरेबमोजिमको रकम प्राप्त गर्नुपर्ने हो, यद्यपि सर्भेयरबाट सिफारिस भएबमोजिम रकम उपलब्ध गराउने परिपाटी भने अहिले सम्म विकास भएको छैन ।
सर्भेयरः असम्बन्धित तेस्रो पक्ष
विमा गर्ने व्यक्तिको कुनै कारणवश क्षति भएको खण्डमा त्यसको उचित मूल्याङ्कनको लागि नियुक्त हुने सर्भेयर कुनै पनि विमा कम्पनीबाट तलब नलिने गरी इजाजत प्राप्त व्यक्ति हो, जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सेवाग्राहीसँग समेत जोडिएको हुँदैन । यसबाट सेवाप्रदायक र सेवाग्राही बीच सेवा आदानप्रदान गर्न सहज परिस्थिति निर्माण हुन्छ । यद्यपि वीमा कम्पनीले समेत क्षति र सर्भेयरबाट मूल्याङ्कन भएको रकम बीचको सन्तुलन बारे तालमेल छ÷छैन भन्ने ठह¥याउन आन्तरिक मूल्याङ्कनकर्ताको समेत व्यवस्था गर्दै आएका छन् । यद्यपि वीमा कम्पनीले समेत क्षतिपुर्ति उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि केही रकम घटाएर मात्र क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउने अवस्था अहिले सम्म कायम छ । विमा कम्पनीले पुर्ण विश्वास गर्ने वातावरण बन्न नसकेको कारण मूल्यांकनकर्ताले सिफारिस गरेको तुलनामा कम रकम मात्र प्राप्त गर्ने अवस्था छ । यसबाट वीमा गर्ने व्यक्ति निराश हुनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ । कतिपय अवस्थामा विमा प्रतिको विश्वास समेत कमजोर हुन सक्ने कुरामा समेत सम्बन्धित पक्षहरु सचेत बन्नु जरुरी छ ।
बौद्धिक वर्ग हुन् विमा सर्भेयर
वीमा सर्भेयर राम्रो ज्ञान र अनुभव समेटेका बौद्धिक वर्गका व्यक्तिहरु हुन् । उनीहरुले पनि राज्यका नियमहरु भित्र नै रहेर काम गरिरहेका हुन्छन्, जुन सबै क्षेत्रमा आवश्यक रहन्छ । कतिपय अवस्थामा मूल्याङ्कनकर्ताले राम्रो तवरले काम गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरा नउठ्ने होइन, यद्यपि यस क्षेत्रका मुल्याङ्कनकर्ताले गरेको काममा कुन किसिमको कमजोरी भएको छ भन्ने सम्बन्धमा अहिले सम्म प्रमाण भने दिन सकिएको छैन । विमा क्षेत्रका नीतिहरुलाई बुझ्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका नियम एवं निर्देशिकाहरुको राम्रो अध्ययन हुनु पर्छ । विमा सर्भेयरहरुले राज्यबाट बनाएका सबै नीतिहरुलाई राम्रो सँग बुझेर काम गर्दै आएका छन् ।
विमा क्षेत्रमा संलग्न सम्बन्धित कम्पनीले आफूले उपलब्ध गराउने सेवालाई सहज, प्रभावकारी र उचित मूल्याङ्कन सहित सेवा प्रदान गर्नु जरुरी रहन्छ । सार्वजनिक दायित्वका कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने सेवालाई पारदर्शि बनाउन विमा कम्पनीको अलावा छाता संगठन एवं राज्य मातहतका निकायहरुबाट समेत विभिन्न किसिमका अनुगमनहरु हुँदै आएका छन् । यद्यपि यसरी गरिने अनुगमनको क्रममा समेत सर्भेयर र विमा कम्पनीले उपलब्ध गराउने रकम बीचको अन्तरलाई विमा कम्पनीबाट राम्रो कारण सहित प्रष्ट्याइएको पाईंदैन । न त विमा कम्पनी र विमा सर्भेयर बीच यस विषयमा अहिले सम्म कुनै छलफल नै हुन सकेको छ । कुनै काम अघी बढाउने क्रममा कहिलेकाहीँ केही समस्या आउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पुःनमूल्याङ्कन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि नेपालमा अहिले सम्म यस्तो अवस्था निकै न्यून छ ।
तथ्याङ्कमा विमा सर्भेयर
नेपालमा विमा सर्भेयरको इजाजतपत्र लिएका व्यवसायीहरु करिब ८ सय छन् । यद्यपि यस क्षेत्रमा संलग्न सक्रिय व्यवसायीहरु भने केबल १० प्रतिशतको हाराहारी (७०-८० जना)मा मात्र छन् । यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुको बार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस बर्ष पनि करिब २ सयले नवीकरण गर्नुभएको छ । यद्यपि नवीकरण गर्ने व्यवसायी र इजाजत लिएर सक्रिय तवरले काम गर्ने व्यवसायी बीच अन्तर किन रह्यो ? भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । जुन स्वभाविक नै हो । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको यस क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको विमा कम्पनी सँग निरन्तर भेटभाट, छलफल र अलि बढि सक्रियताको आवश्यकता रहन्छ । विमा क्षेत्रमा संलग्न सर्भेयर माथिल्लो तह देखि तल्लो तह सम्म नै राम्रो सम्बन्ध बनाउन तत्पर हुनुपर्छ । यद्यपि विमा सर्भेयर क्षेत्रमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिहरुले आफुलाई बौद्धिक एवं उच्च पदस्थ व्यक्तिको रुपमा समेत लिन सक्नुहुन्छ । यद्यपि यस व्यवसायमा संलग्न रहने क्रममा यस किसिमको स्वाभिमान रहेको खण्डमा बाह्य सम्पर्क विस्तार नहुन सक्छ । जसले गर्दा राम्रो सम्पर्क नभएका व्यक्तिहरुले कम्पनी नवीकरण गरिरहे पनि वास्तविकतामा उनीहरुको पहुँच राम्रो नबन सक्छ ।